Body Acne ကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, ေဆာင္းပါး	 October 19, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၁၉ အောက္တိုဘာ ၂၀၂၀
၁။ အသက်၂၈/ကျား ကျွန်တော်ခန္တာကိုယ်မှာဝက်ခြံလိုမျ ို းအဖုလေးတွေထွက်လာတယ်ဆရာ ဖြစ်တာ၁လလောက်ရှိပီ ညှစ်လိုက်ရင်ဝက်ခြံလိုအဆံလေးတွေထွက်လာတယ် အဆံထွက်သွားလဲမပျောက်ပဲနာနေတယ်ဆရာ ဘယ်လိုလိမ်းဆေးသောက်ဆေးသုံးရမလဲဆရာ ကျေးဇူးပြု ပြီးလမ်းညွှန်ပေးပါဦးဆရာ လက်ရှိ့့ မှာနေတာပါခင်ဗျာ၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်က အသက် ၂၇ ပါ။ ကျောပြင်မှာ ဝတ်ခြံထွက်တာ အဲဒါ တွက်တက်ပါသလားခင်ဗျာ။ တခြား ကူးဆက်ရောဂါလား ဆရာသိချင်ပါတယ်။ လက်မောင်းမှာရောဆရာ။ ကြာတာတော့နှစ်နဲ့ကြာနေပါပီဆရာ။ အမဲစက်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်ဆရာ။ နားတစ်ဝှုက်ရောပါ။ ဘယ်လို ဆေးတွေသုံးဆွဲသင့်ပါသလဲဆရာ။
မဖြေခင် ပြင်ပါရစေ။ ခန္ဓာကိုယ်လို့ ရေးရတယ်။ ရှိပြီ လို့ ရေးရတယ်။ ကူးစက်ရောဂါလို့ ရေးရမယ်။ နားတဝိုက်လို့ ရေးရတယ်။ သုံးစွဲလို့ ရေးရတယ်။ ဝက်ခြံကတော့ မကူးစက်ပါ။ သတ်ပုံအမှားကတော့ တပြည်လုံးကို ကူးစက်နေတယ်။
၂။ ဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက်၂၂နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ စကားအသုံးအနှုန်းရိုင်းသွားရင် သည်းခံပေးပါဆရာ။ ကျွန်မတင်ပါးမှာ ဝက်ခြံလားမပြောတတ်ပါ။ အဖုတွေ ပေါက်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ အသက် ၁၄နှစ်လောက်ကတည်းက ဖြစ်နေတာပါ။ တင်ပါးမှာဖြစ်တာဆိုတော့ ဆေးခန်းလည်းမသွားရဲလို့ ပျောက်မလားပျောက်မလားနဲ့ စောင့်နေရင်း ခုထိ ကြာသွားပါတယ်။ ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆေးလိမ်းတာ ဆေးသောက်တာမျိုးမရှိပါဘူးရှင်။ ထိုင်တဲ့အခါနာပါတယ်။ သူ့ဘာသာပျောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အမာရွတ်ကျန်ပြီးမဲနေပါတယ်။ အခုတလော တဖုနှစ်ဖုမကပေါက်လာလို့ ထိုင်ရတာအတော်လေး အဆင်မပြေဖြစ်လို့ အရဲစွန့်မေးလိုက်ရတာပါဆရာ။ ကျွန်မသိချင်တာက သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလည်း နေပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေလည်း တနေ့တစ်ခါရေချိုးပြီးတိုင်း လျှော်ဖွတ် အသစ်လဲဝတ်ဆင်ပါရက်နဲ့ ဘာလို့ပေါက်ရတာလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ချိုင်းမှာလည်း ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ပျောက်သွားတဲ့အခါ ချိုင်းလည်းမဲကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဝက်ခြံဆိုရင်မျက်နှာမှာပေါက်တဲ့အခါ အမာရွတ်မကျန်တတ်ပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲသိပါရစေဆရာ။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အဖုရော အမာရွတ်တွေရော မဲနေတာတွေပါ ပျောက်ချင်ပါတယ်။ ဘာဆေးတွေသုံးဖို့လိုလဲ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
၃။ သမီးရဲ့ဂျိုင်းမှာ ဝက်ခြံလိုမျိုး အဖုလေးတွေရှိနေပါတယ်။ မဲမဲလေးတွေပါ။ ညှစ်လို့လည်းမရဘူးရှင့်။ မြုံနေသလိုပဲ။ အဲဒီ အဖုလေးထဲမှာ အမွှေးငုတ်တိုလေးတွေလည်း မြင်နေရတယ်။ ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပေါင်မှာလဲ အဲလိုအဖုလေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ပေါင်ကဟာတော့ ညှစ်လို့ရပါတယ်။ အမွှေးကော ဝက်ခြံလို အဆံလေးတွေပါ ထွက်လာပါတယ်။
၄။ ၂၇ နှစ် မိန်းကလေးပါ။ လည်ပင်း နောက်ကျော လက်မောင်း ရင်ဘတ်တို့မှာ အဖုလေးတွေပေါက်တယ်ဆရာ။ အဆံအဖြူလေးတွေ အဲ့ဒါ တချို့ဖတ်ဖူးတာတော့ဝက်ခြံလို့တော့သိရတယ်။ နောက်တချို့ကြတော့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာလို့ ဖတ်ရတယ်ဆရာ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ ရာသီကတော့ရက်မမှန်ဘူးဆရာ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ပုံကတော့ရိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်တာတော့ ၇ နှစ် ၈ နှစ်လောက်ကြာပြီဆရာ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နှင့်။
စတုတ္ထမေးတဲ့သူကို မိန်းကလေးသာသိ။ အိမ်ထောင်ရေး စတာ မသိ (ဆောရီး)။ ကင်ဆာမဟုတ်။ ကင်ဆာ မဖြစ်စေ။ ရာသီမမှန်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေနိုင်။ ဝက်ခြံဆိုတာ မျက်နှာမှာပေါက်တယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တူတာမျိုးက ချိုင်း၊ နောက်ကျောနဲ့ ပေါင်တွေမှာလဲ ပေါက်သေးတယ်။ မျက်နှာမှာ ပေါက်တာကို Acne လို့ခေါ်တယ်။ တခြားနေရာမှာပေါက်တာကို Pimples လို့ခေါ်တယ်။ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးမကြီးပါ။ မကုဘဲထားလို့ရတယ်။
ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -• Sweating ချွေးထွက်များခြင်း။ ပေါင်းအတွင်းပိုင်းဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်းအမြဲလိုလိုဖုံးထားရလို့ ချွေးများတယ်။ အပေါ်ကထွက်တဲ့ ချွေးစီးကျတာလဲ ခံရသေးတယ်။• Folliculitis ကိုယ်မွှေးထွက် အိတ်ကလေးတွေရောင်ရင်ဖြစ်တယ်။ ဖိထိုင်ရတဲ့ တင်ပါးမှာလဲဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီးယား ဝင်ရင် နာမယ်၊ ယားမယ်၊ ရောင်မယ်၊ ပြည်တည်မယ်။• Thigh Acne ပေါင်ဝက်ခြံ။ အရေပြားပိုးဝင်တာပါဘဲ။ ယောက်ျားတွေမှာ ကပ်ပဲ့အိတ်မှာဖြစ်တယ်။ ချွေးထွက်အိတ်တွေမှာ မဆင်မသင့်တာဖြစ်လာလို့ပါ။ အဆီပိုထွက်မယ်၊ ပိုးဝင်မယ်။ Blackheads ခေါင်းဖြူဝက်ခြံလို့လဲ ခေါ်တယ်။• Skin Creams အရေပြားလိမ်း ခရင်မ်တွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Moisturizer ကိုနေ့တိုင်းသုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Water based moisturizers သုံးတာက ပိုသင့်တယ်။• Hormonal Changes ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ။ ရှောင်လဲမတာမျိုး မိန်းကလေးတွေမှာ များတယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်၊ ရာသီစက်ဝန်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ သွေးဆုံး။• အားကစားသမားတွေ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးလဲရှိတယ်။ ချွေးအပြင် ဖိအားများတာခံရလို့လဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
ဘယ္လိုကုသမလဲ -ဖြစ်တဲ့နေရာကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ အပူချိန် မများစေနဲ့။ ရေ + ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်ရှင်းရေး ပိုလုပ်ပါ။ ဆပ်ပြာမှာ Benzoyl peroxide ပါတာမျိုးကပိုကောင်းတယ်။ Benozoyl peroxide လိမ်းဆေးလဲရှိတယ်။ အဝတ်အစား ချောင်တာနဲ့ (ကော်တွန်) ဝတ်ဆင်ပါ။ အတွင်းခံပြောင်းပါ။
ပိုး (ဗက်တီးရီးယား) ဝင်ရင် ဒီဆေးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်။1. Tetracycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ တခါသောက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာလဲဆိုတာ အတိအကျ ပြောမရဘူး။ သက်သာတဲ့အထိလို့ အကြမ်းပြောလို့ ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် လျော့နိုင်တယ်။ ဆေးကို အစာမရှိချိန် သောက်တာ ကောင်းတယ်။ သတိထားဘို့က အသက် ၉ နှစ်အောက် နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဒီဆေးမပေးရဘူး။ အဆင်ပြေတာက ဒီလူမျိုးတွေက ဝက်ခြံဖြစ်တတ်သူတွေ မဟုတ်ကြပါ။
2. Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ သူက (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ထက်သာတာက ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ အစားနဲ့လဲ သောက်လို့ရတော့ အစားကြီးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ကိုက်တယ်။ တခါသောက် 250 – 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ပျို့အန်ချင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေလဲ ပေးနိုင်တယ်။
3. Minocycline ဆေးကို ပြီတည်နေချိန်မှာ သုံးရင်ကောင်းတယ်။ အစာနဲ့ဝေးရင် ပိုကောင်းတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ခေါင်းမူး၊ ပျို့-အန်၊ အရေပြားနဲ့ သွားညိုတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
4. Doxycycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) နဲ့ (အရစ်သရိုမိုင်စင်) သုံးလို့ မထူးခြားသူတွေကို ဒီဆေး ပေးတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ အစာနဲ့လဲနီးလို့ ရတယ်။ ပျို့ချင်တယ်။ နေရာင်နဲ့ မတည့်ဘူး။
5. Clindamycin ဆေးကို တခါသောက် 75 to 150 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ သောက်ဆေးထက် လိမ်းဆေး အဖြစ်သုံးတာ များတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကတော့ အူမကြီးရောင်တတ်တယ်။
ဘယ်ပဋိဇီဝဆေးမဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်းမှိုဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကို ပြင်ဘို့ကပိုပြီး အဓိကကျတယ်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်တာက ခက်တတယ်။ ဆောရီ။ ရာသီဖြစ်စဉ်၊ ကိုယ်ဝန်၊ ဟော်မုန်းပါတားဆေး စတာတွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်ဟော်မုန်းအချိုးအစား အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်။